Ukuhonjiswa Kwebhotile Igolide ekhanyayo "Igolide yaseVietnam. UHlelo oluMnyama ”luzuze ukubonakala kwalo kubugcisa baseLithuania. I-Rhombus kunye ne-herringbones, zidityaniswe kwizikwere ezincinci, ziipatheni eziqhelekileyo kubugcisa beLithuania. Nangona ukubhekiswa kwezi motifs zikazwelonke zifumene iindlela zangoku zangoku-imbonakalo eyimfihlakalo yexesha elidlulileyo yaguqulwa yaba bubugcisa bala maxesha. Imibala yegoridon kunye nemibala emnyama igxininisa inkqubo ekhethekileyo yokucoca i-vodka ngokusebenzisa amalahle kunye neefilitha zegolide. Yile nto eyenza "Lithuanian vodka Gold. UHlelo oluMnyama ”lubuthathaka kwaye licacile kakhulu.
Ikhalenda Yila igumbi, yazisa ngamaxesha onyaka - Ikhalenda yeentyatyambo iza noyilo lwevase elinentyatyambo ezili-12 ezahlukeneyo. Yenza bomi bakho bube mnandi inyanga nenyanga ngentyatyambo yexesha elithile. Uyilo olusemgangathweni lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umbono woBomi ngoYilo.
Ubucwebe Sinikela ubungqina bemfazwe engapheliyo phakathi kokulungileyo nokubi, ubumnyama nokukhanya, imini nobusuku, isiphithiphithi nocwangco, imfazwe noxolo, iqhawe kunye neligi yonke imihla. Nokuba yeyiphi inkolo yethu okanye ilizwe lethu, sixelelwe ibali labahlobo bethu abasoloko bekho: ingelosi ihleli egxalabeni lethu lasekunene kunye nedemon ngasekhohlo, ingelosi isicenga ukuba senze okuhle kwaye sibhala phantsi imisebenzi yethu elungileyo. ukwenza okubi nokugcina ingxelo yezenzo zethu ezimbi. Ingelosi sisifaniso esifanelekileyo "superego" yethu kwaye umtyholi umela u "Id" kunye nomlo oqhubekayo phakathi kwesazela kunye nokungazi.
Iilebheli Umhambisi yingqokelela yoomoya abavela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ezinxulumene nomxholo wokuhamba komoya kunye nomhambi ohamba ngenqwelomoya njengohlobo lophawu. Iimpawu zohlobo ngalunye lwesiselo zichazwa ngemifanekiso emininzi, amagama abhaliweyo afana neebheji zokuhamba ngenqwelomoya kunye nemizobo esebenza njengeendlela zokupheka. Uyilo olubumbeneyo luhambelana neetoni ezahlukeneyo ze-foil enemibala, iicacacers ezahlukeneyo, iipateni kunye ne-embossing.
I-Usb Flash Drive Umbane Wamandla Ukuhonjiswa Kwebhotile Ikhalenda Ubucwebe Iilebheli